Mitsubishi Canter 2008 (#637238) ကို Kamaryut ၿမိဳ့နယ္တြင... | CarsDB
5551 total views, 8 today
Lot Number: #637238
High Grade Image Co, Ltd
Mitsubishi Fuso Canter (Truck)
လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို မိမိကိုယ်ပိုင်အမည်ပေါက် ရန်ကုန်လိပ်စာဖြင့် ရရှိပါမည်။
ရောင်းဈေး	-	380သိန်း
FE70B - 550371 , 2008Model, 2970CC, 10 Feet,
2Tons, 195021 KM, 4M42 Engine, White Color
Car No. -	Sati/…. Company License (BGO)
*** ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်သုံးရန် ကားသန့်သန့် ၊ 10 ပေ Canter
ကားမျိုးကိုမှ ရှာနေသူများအတွက် ***
"[Can show Japan Export Certificate]
"မူဝါဒအသစ်အရ ယခုနှစ် 2019 ခုနှစ်မှစ၍ (2015Model မှ 2019Model)ထိ ဘယ်မောင်းကားများသာတင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။ Japan ညာမောင်းကားများ ထပ်၍ တင်သွင်းလို့မရတော့ပါ။ မော်ဒယ်မြင့်သာ တင်သွင်းခွင့်ရသောကြောင့် ကားတန်ဖိုးမှာလည်း ယခုကားဈေးနှုန်းနှင့် အရမ်းကွာသွားပါလိမ့်မည်။ဒါ့ပြင်ဘယ်မောင်းကားဘဲရမှာပါ။ဒါကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှတိုက်ရိုက်တင်သွင်းထားသော ဂျပန်နိုင်ငံထုတ်
တခြားကားသန့်သန့်လေးတွေကို လေ့လာနိုင်ရန် HGI ၏ Facebook Page (https://www.facebook.com/highgradeimage/)လေးကို
Like လုပ်ထားလိုက်ပါနော်။ သူငယ်ချင်းနှင့် မိတ်ဆွေတွေကို နှုတ်လေးနဲ့ကူညီနိုင်ဖို့ Like & Share လေးလုပ်ပေးပါလို့ ......."
" ကားနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံကို စုစည်းစာအုပ်ချုပ်ပေးသည်မှာ ကျွန်တော်များ HGI ၏ မှန်ကန်မှု့နှင့်စေတနာသာ ဖြစ်ပါသည်။ "
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း	-	၀၉ ၅၁၉၇၄၇၂
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) High Grade Image Co, Ltd မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Mitsubishi Canter 2008 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။
နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသည့်အချိန်7ရက်
Featured သက်တမ်းကုန်ရန် 22 ရက်